Social Media ပျေါမှာ Negative Comment တှရေလာခဲ့လြှငျ ဘယျလိုဖွရှေငျးမလဲ? -
သငျ့ရဲ့ လုပျငနျးနဲ့ အဆငျမပွအေလိုမကတြဲ့ Customer တဈယောကျက Negative Comment ဒါမှမဟုတျ Message တှပေေးလာခဲ့မယျဆိုလြှငျဘယျလိုကိုငျတှယျဖွရှေငျးကမြလဲ? Internet Marketing အသုံးပွုနပွေီဆိုရငျတော့ သငျ့ လုပျငနျးနဲ့ပတျသတျတဲ့ Information တှဖွေဈတဲ့ User တှရေဲ့ Reach, Engagement, Feedback တှရေရှိပါတယျ။ Reach, Engagement ကတော့ မြားမြားရရငျ ကောငျးပမေဲ့ Feedback မှာဆိုရငျတော့ Positive Comment နဲ့ Negative Comment ဆိုပွီးရှိပါတယျ။ Positive Comment ကပွဿနာ မရှိပမေဲ့၊ Negative Comment တှမြေားလာရငျတော့ သငျ့လုပျငနျး အပျေါထိခိုကျမှုတှေ ရရှိလာနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ယခုတဈခေါကျ ဖျောပွပေးခငျြတဲ့ အကွောငျးအရာကတော့ Negative Comment တှကေိုဘယျလို အမွနျကိုငျတှယျဖွရှေငျးရမလဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးမှာဖွဈပါတယျ…
3.အခြိနျမဆှဲပဲ အလငျြအမွနျဖွရှေငျးပါ။ Social Media အသုံးပွုသူအမြားစုဟာ Comment Reply or Message Reply တှကေိုအကွာကွီးစောငျ့ဆိုငျးရတာမြိုးကို မနှဈသကျကပြါဘူး။အထူးသဖွငျ့ ကိုယျ့ရဲ့လုပျငနျးအပျေါ အထငျမွငျလှဲနတေဲ့အခါမြိုးမှာ အလငျြအမွနျ ဖွရှေငျးတာဟာအကောငျးဆုံးပါပဲ။ဒါကွောငျ့ Customer စိတျတိုငျးကစြမေဲ့ Reply မြိုးဖွဈအောငျကွိုးစားပွီးဖွရှေငျးသငျ့ပါတယျ။
5. Negative Feedback တှကေို Reply ပွနျတဲ့အခါ ပထမဦးစှာ တောငျးပနျပါ။ ပွီးမှသာ အဆငျမပွဖွေဈရခွငျးရဲ့ ပွဿနာကို မေးမွနျးပွီး ဖွရှေငျးပါ။ ဒီအခကျြဟာ တဈခါတဈရံမှာ စိတျဆိုးနတေဲ့ Customer ကို Loyal Customer ဖွဈအောငျပွောငျးလဲပေးနိုငျတဲ့ အခှငျ့အလမျးလဲဖွဈနိုငျပါတယျ။
Ref – bedigitalgiant
Social Media ပေါ်မှာ Negative Comment တွေရလာခဲ့လျှင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ?
သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ အဆင်မပြေအလိုမကျတဲ့ Customer တစ်ယောက်က Negative Comment ဒါမှမဟုတ် Message တွေပေးလာခဲ့မယ်ဆိုလျှင်ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကျမလဲ? Internet Marketing အသုံးပြုနေပြီဆိုရင်တော့ သင့် လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Information တွေဖြစ်တဲ့ User တွေရဲ့ Reach, Engagement, Feedback တွေရရှိပါတယ်။ Reach, Engagement ကတော့ များများရရင် ကောင်းပေမဲ့ Feedback မှာဆိုရင်တော့ Positive Comment နဲ့ Negative Comment ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ Positive Comment ကပြဿနာ မရှိပေမဲ့၊ Negative Comment တွေများလာရင်တော့ သင့်လုပ်ငန်း အပေါ်ထိခိုက်မှုတွေ ရရှိလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတစ်ခေါက် ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ Negative Comment တွေကိုဘယ်လို အမြန်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်…
1.ပထမဆုံး Negative Comment တွေ Message တွေကိုသေချာဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုပြီး ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေပါ? ဘယ်လိုကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာကို တွေးတောပါ။
2.မိမိလုပ်ငန်းအပေါ် အထင်မြင်လွဲမှားပြီးပေးတဲ့ Negative comment တွေကို ဖျက်ပစ်ခြင်းမျိုးကိုမလုပ်ပါနဲ့။ Customer နဲ့ အထင်မြင်လွဲမှားမှုမျိုးတွေရှိလာခဲ့လျှင် သေချာစွာဖြေရှင်းထားတဲ့ Comment Reply မျိုးကို အခြား Customer တွေမြင်တဲ့အခါ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအပေါ် အထင်မြင်လွဲမှားတာမျိုးတွေထပ်မရှိလာနိုင်အောင် ပြုလုပ်လိုက်သလိုပါပဲ။
3.အချိန်မဆွဲပဲ အလျင်အမြန်ဖြေရှင်းပါ။ Social Media အသုံးပြုသူအများစုဟာ Comment Reply or Message Reply တွေကိုအကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းရတာမျိုးကို မနှစ်သက်ကျပါဘူး။အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအပေါ် အထင်မြင်လွဲနေတဲ့အခါမျိုးမှာ အလျင်အမြန် ဖြေရှင်းတာဟာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒါကြောင့် Customer စိတ်တိုင်းကျစေမဲ့ Reply မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
4.Customer service ကိုအမြဲကောင်းမွန်အောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ Follower တွေအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်နေတဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ Comment or Message Reply တစ်စောင်ခြင်းစီတိုင်းဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ ဒေါသတကြီးပြန်လည် တုန့်ပြန် မဖြေရှင်းပါနဲ့။
5. Negative Feedback တွေကို Reply ပြန်တဲ့အခါ ပထမဦးစွာ တောင်းပန်ပါ။ ပြီးမှသာ အဆင်မပြေဖြစ်ရခြင်းရဲ့ ပြဿနာကို မေးမြန်းပြီး ဖြေရှင်းပါ။ ဒီအချက်ဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ စိတ်ဆိုးနေတဲ့ Customer ကို Loyal Customer ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အထပ်ပါ အချက်တွေနဲ့ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ ရရှိနေတဲ့ Social Media Comment တွေမှာ Negative ဖြစ်နေတဲ့ Comment တွေကို အကောင်းဆုံး ကိုင်တွယ်နိုင် ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Thursday February 14th, 2019/ Blog/0Comment